ICM Single Subject Diploma in Human Resources Management
Class Code : SFU-ICM-HRM-04-01 (Online)
ICM Single Subject Diploma in Human Resources Management (ဖေဖော်ဝါရီလတန်းခွဲ)
Class Code : SFU-ICM-HRM-03-01 (Online)
ICM Single Subject Diploma in Human Resources Management (Online) မတ်လ တန်းခွဲသစ်အတွက် အပ်နှံနိုင်ပါပြီ။
ICM Single Subject Diploma in Human Resources Management ဘာသာရပ်မှာ သင်ကြားမည့် အကြောင်းအရာများကတော့
ဒီသင်တန်းကို ဘယ်သူတွေ တက်သင့်သလဲ?
ICM Single Subject Diploma in Human Resources Management ဘာသာရပ်တွင် အသေးစိတ်သင်ကြားရမည့် ခေါင်းစဉ်များ -
I. People, Organisations and Behaviour
2. Work, organisation and job design
4. Motivation, commitment
II. Resourcing and Workforce Planning
• Resourcing practice
• Strategic learning and development
• Process of learning and development
• Practice of learning and development
VI. Human Resources Skills စသည်တို့ကို သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
09-250717166 သို့ ဆက်သွယ် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
* SFUx Certificate in Human Resources Management ကျောင်းသားဟောင်းများအနေဖြင့် ICM Single Subject Diploma in Human Resources Management အတန်းကို တက်ရောက်ပါက SFUx မှ certificate ဘာသာရပ်တစ်ခုကို Discount ရရှိပါမည်။